नेपालमा भारतीय चासाे, किन बढ्याे राजदुतकाे अस्वभाविक दाैडधुप ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेपालमा भारतीय चासाे, किन बढ्याे राजदुतकाे अस्वभाविक दाैडधुप ?
नेपालमा भारतीय चासाे, किन बढ्याे राजदुतकाे अस्वभाविक दाैडधुप ?
पुस २३ गते, २०७४ - १२:०८
काठमाडौं । नेपालकाे राजनीतिमा हस्तक्षपकारी भूमिका खेलेकाे भारतले फेरी अाफ्नाे चाँसाे अस्वाभाविक तरिकाले बढाएकाे छ । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरुसंगै नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीको दौडदूध सर्वाधिक बढेकाे छ ।
वाम गठबन्धन कसरी भत्काउन सकिन्छ त्यसलार्इ मुख्य उद्देश्य बनाएका देशी तथा विदेशी शक्तिले विभिन्न किसिमका चलखेललार्इ तिव्रता दिएका छन् । वाम गठबन्धनका नेताहरुले अाैपचारिक र अनाैपचारिक दुवै तरिकाले भन्दै पनि आएका छन् । यहि बेला पुरीको याे अस्वाभाविक दौडधूपले थप आशंका पैदा गरेकाे नेताहरुले बताएका छन् ।
फोनसंगसंगै राजनीति पनि पेचिलो बन्दै गयाे । मोदीले फोनवार्तामा के कुरा गरे ? नखुलाएका तीनै दलका प्रमुख नेताले मोदीको फोन पछि केपी शर्मा ओली र माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सोही राती एक वजेसम्म बालकोटमा छलफल गरेकाे नेताहरुले बताए । मोदीको फोन पछि नै काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोलाएर पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्न समेत ‘अफर’ गरेकाे विषयले राजनीति एकाएक तताएकाे थियो ।
ओलीलाई भेटेर जब मन्जिभ सिंह पुरी दिल्ली उडे, त्यसपछि सप्तरीमा रहेका उपेन्द्रलाई बोलाएर ओलीले छलफल समेत गरे । ओली र यादवकाे छलफलले राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भयो । दिल्लीबाट फर्के लगतै राजदूत पुरी पुनः सक्रिय भए । पुरी सक्रिय भएपछि एमालेसँग नजिक हुन चाहेका मधेशी दलका नेताहरु पनि टाढिए र लोकतान्त्रिक गठबन्धनतिर ढल्किन पगे ।
यहि कुराबाट पनि प्रष्ट रुपरेखा देखिएकाे छ । पार्टी एकताकाे प्रक्रिया छिटाे टुङ्गाे लगाउन कार्यकर्ताले भनिरहेका बेला अाशंकापूर्ण अभिव्यक्ति अाइरहेका छन् । पछिल्लो समय पनि एमाले अध्यक्ष ओली र माअाेवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच निर्णायक वार्ता हुन सकिरहेको छैन । कार्यकर्तामा अालस्यता पैदा भएकाे छ कि कहिले एकता नगरेर जनताकाे चाहना विपरितकाे निर्णयत हुने त हैन ?
वाम गठबन्धनकाे सरकार हुने निश्चित देखिएपछि राजदूत पुरीकाे अस्वभाविक सक्रिय चाँसाे बढेकाे छ । उनि अाफुमात्र सक्रिय भएका छैनन् , त्यसमा काँग्रेसलाई पनि सक्रिय बनाइएको छ । कांग्रेसकाे बैठक चलिरहेको बेला पुस १४ गते एकाएक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका राजदुतले कांग्रेसका अन्य शीर्ष नेतालाइसमेत राखेर छलफल गरेको समेत वाहिर अाएकाे छ ।
शुक्रबार मात्रै राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुले भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नर्थ डेक्स हेर्ने सुधाकर दलेलसँग भेट गरेका छन् । उनी केहि दिन पहिला नेपाल आएको बताइएको छ । सुधाकर दलेलसँग राजपा नेताहरुको एकघण्टा भएकाे छलफललार्इ अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको नेताहरुले बताएका छन् । यसविषयमा महन्थ ठाकुरका सहयोगी सत्येन्द्र मिश्रले गोप्य छलफल भएको कुरा खुलाउन चाहेनन् । दलेलले काँग्रेस, माओवादी र एमालेका नेताहरुलाई पनि भेटेको बताइएको छ ।
पुस २३ गते, २०७४ - १२:०८ मा प्रकाशित